Ny endriky Jesosy Kristy any amin’ny voninahiny - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Rehefa tonga tany amin‟ny voninahiny ary i Jesosy Kristy, dia ahoana no nahitan‟i Jaona azy? satria tsy nipoitra tamin‟ny olona maro intsony izy, fa ny fisehoana farany nataon‟i Jesosy Kristy izany dia ny fotoana nanomezany ity hafatra farany ity, ka efa antitra dia antitra moa i Jaona raha nomena ity hafatra ity, efa nanakaiky ny zato taona izy. Ary nigadra tany amin‟ny nosy Patmo.
Izao no nahitan‟i Jaona azy raha niseho taminy izy:
Apokalypsy 1:12-17 «12 Dia nitodika aho nizaha ilay feo niteny tamiko. Koa rehefa nitodika aho, dia nahita fanaovan-jiro volamena fito; 13 ary teo afovoan’ny fanaovan-jiro dia nisy Anankiray tahaka ny Zanak’olona* niakanjo akanjo lava hatrany an-tongony sady nisikina fisikinam-bolamena teo amin’ny tratrany.[Na: toa zanak’olona] 14 Ary ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volon’ondry fotsy, dia tahaka ny oram-panala, ary ny masony tahaka ny lelafo;
15 ary ny tongony tahaka ny varahina manganohano, hoatra ilay voadio teo amin’ny fandrendrehana iny; ary ny feony toy ny firohondrohon’ny rano be. 16 Ary nitana kintana fito teny an-tànany ankavanana Izy; ary nisy sabatra maranitra roa lela nivoaka avy teo am-bavany; ary ny tarehiny dia tahaka ny masoandro mamirapiratra amin’ny heriny.
17 Ary raha nahita Azy aho, dia lavo niankohoka tahaka ny maty teo anoloan’ny tongony. Fa Izy nanendry ahy tamin’ny tànany ankavanana ka nanao hoe: Aza matahotra; Izaho no Voalohany sy Farany, »
Izany hoe ny fahitan‟i Jaona an‟i Jesosy Kristy rehefa tonga tany amin‟ny voninahiny Izy izany dia sahala amin‟izao:
– Ny masony tahaka ny lelafo,
– manao fisikinam-bolamena eo amin‟ny tratrany,
– manao ankanjo fotsy lava hatrany an-tongony,
– ny tarehiny mamirapiratra tahaka ny masoandro,
– ny feony tahaka ny an‟ny olona marobe,
– ary raha nahita an‟izany i Jaona dia tsy nahazaka an‟izay voninahitry Jesosy Kristy izay fa lavo tahaka ny maty.Ka jerentsika amin‟izay ary izany ny fandehan-javatra rehetra, moa ve i Jesosy Kristy tamin‟izy talohan‟ny nidinany tety ambonin‟ny tany, dia efa io endrika nahitan‟i Jaona azy io no endrika nisehoany raha toa ka efa nisy nahita Izy?
Ary moa ve mitovy amin‟io nahitana Azy tany amin‟ny voninahiny io ve sa mbola tsy izy io? Sa izy efa taty aorian‟ny nitsanganany tamin‟ny maty io vao naka io endrika hisehoany eo amin‟ny voninahiny io?
Efa voajerintsika teo aloha, fa efa nilaza i Jesosy Kristy, fa mbola tsy hary i Abrahama dia efa Izy Izy, Izy no nahariana ny zavatra rehetra talohan‟ny nanaovana an‟izao tontolo izao. Ka ny fanontaniana mipetraka dia izao: raha izany no izy, dia efa io endrika hisehoan‟i Jesosy Kristy io, izay endrika hisehoany any amin‟ny voninahiny io tokoa ary ve no endrika nisehoany talohan‟ny nahatongavany tety ambonin‟ny tany, raha toa tokoa ka mitombina ny zavatra noteneniny fa hoe mbola tsy nisy izao tontolo izao dia efa teo Izy? Satria Jesosy Kristy izao efa tonga any amin‟ny voninahiny, dia tena endrika hafa mihitsy no nahitan‟i Jaona azy fa tsy nitovy tamin‟ny endriny fony Izy mbola tety an-tany ka niaraka tamin‟ireo apostoly ireo.
Tany amin‟ny voninahiny Izy no nesorina izay voninahiny izay, ary rehefa tety an-tany Izy ka novonoina dia niakatra tany an-danitra, dia niverina taminy indray ny voninahiny rehefa tonga ny andro pentekosta!. Noho izany, satria io voninahiny io no naverina taminy rehefa nitsangana tamin‟ny maty Izy, dia niova ny fahitan‟i Jaona azy. Noho izany raha io voninahiny io no naverina taminy, dia tokony ho ohatra an‟io ihany koa izany no tokony ho endriny fony izy mbola teo amin‟ny voninahiny. Dia tena hitantsika tokoa izany ary dia voaporofo ao amin‟i:
Daniela 10:4–9 «4 Ary tamin’ny andro fahefatra amby roa-polo tamin’ny volana voalohany, raha teo amoron’ny ony lehibe aho (Hidekela izany), 5 dia nanopy ny masoko aho ka nijery, ary, indro, nisy lehilahy iray nitafy rongony fotsy, ka tena volamena avy any Ofaza no nisikinany;
Tena mifandraika tanteraka ny fanambaran‟i Jaona sy i Daniela :
Andeha ho hasehontsika amin‟ny alalan‟ny fampitahana amin‟ny tabilao ireo fanambarana roa ireo:
FANAMBARAN’I DANIELA FANAMBARAN’I JAONA (APOKALYPSY)
nisy lehilahy iray nitafy rongony fotsy nisy Anankiray tahaka ny Zanak’olona* niakanjo akanjo lava hatrany an-tongony
ka tena volamena avy any Ofaza no nisikinany; sady nisikina fisikinam-bolamena teo amin’ny tratrany.
tahaka ny krysolita ny tenany ary tahaka ny helatra ny tarehiny Ary ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volon’ondry fotsy, dia tahaka ny oram-panala, ary ny tarehiny dia tahaka ny masoandro mamirapiratra amin’ny heriny.
ary tahaka ny fanilo mirehitra ny masony, ary ny masony tahaka ny lelafo;
ary mivolom-barahina manganohano ny sandriny sy ny tongony; ary ny tongony tahaka ny varahina manganohano, hoatra ilay voadio teo amin’ny fandrendrehana iny;
ary ny feony toy ny feon’olona maro be; ary ny feony toy ny firohondrohon’ny rano be.
ary izaho Daniela ihany no nahita ny fahitana; fa ny olona izay teo amiko kosa tsy mba nahita izany, fa toran-kovitra indrindra izy ka nandositra niery. Ary dia nilaozana ho irery aho ary nahita izany fahitana lehibe izany, dia tsy nisy hery tafajanona tato amiko; fa nihasimba nivaloarika ny tarehiko, ary tsy nisy hery intsony tamiko. Ary raha nahita Azy aho, dia lavo niankohoka tahaka ny maty teo anoloan’ny tongony. Fa Izy nanendry ahy tamin’ny tànany ankavanana ka nanao hoe: Aza matahotra; Izaho no Voalohany sy Farany,
Dia mazava ho azy izany raha nilaza izany i Jesosy Kristy fa hoe: “mbola tsy nisy i Abrahama dia efa hary Aho”; dia nilaza ihany koa ny mpaminany Solomona nanao hoe: “mbola tsy noharina izao rehetra izao dia efa nisy aho, ilay mpitamarika teo anilan’ny Ray”. Dia io Jesosy Kristy izay voalaza ao amin‟ny Daniela io izany, no ilay mpita-marika teo anilan‟ny Ray, talohan‟ny nahariana izao rehetra izao. Efa teo Izy izany, Izy izany no nohariana voalohany indrindra. Ary izay no nahatonga azy hilaza tao amin‟ny Jaona fa hoe :
Ilay tenin‟Andriamanitra tao amin‟ny tenany teo iny izany no navoakany tao, dia nataony tonga olona, ary io teny io no namoronany izao rehetra izao araka ny hitantsika tany amin‟ny Genesisy hoe: “andao isika hamorona olona tahaka ny endrik’isika”. Fa jereo anie ilay endrika hisehoan‟i Jesosy Kristy tao amin‟ny voninahiny io, fa misy loha izy, misy volo, misy maso, misy vava matoa afaka miteny, misy tànana, misy tongotra, misy vatana, misy tratra. Dia izay no mahatonga antsika ho ohatra izao no endrik‟isika izao, fa tsy sanatria ohatra ny bibilava na ny alika, na ny voalavo, na soavaly fa endrik‟Andriamanitra isika. Noho izany, dia mazava be izany fa ity Jesosy Kristy ity, dia tenin‟Andriamanitra izay noharihany tahaka ny olombelona ho ohatra ny endrik‟Andriamanitra isika raha niainga hatrany amboalohany.
I Jesosy Kristy dia ilay Tenin‟Andriamanitra nivoaka avy tao amin‟Andriamanitra ary dia nataony tonga nofo. Io ilay tenin‟Andriamanitra io no nahariana an‟izao tontolo izao, hafa tsy ny famoronana ny olombelona.
Zavatra roa monja no nampiasan‟Andriamanitra ny rantsan-tanany dia ny:
Ka na iza na iza no te hamotika izany, dia ho sasa-poana ihany, satria Jehovah Andriamanitra mihitsy no nanoratra izany didy sy lalàna izany. Io fivoahan‟ny tenin‟Andriamanitra tao aminy io, ka nanomezany endrika azy ho tonga nofo io, no nahatonga an‟i Jesosy Kristy honina tety ambonin‟ny tany.
Jaona 1:14 « Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina* tamintsika; ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra miendrika ho an’ny Lahitokana avy tamin’ny Ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. [*Gr. nitoetra an-day] » Raha izay izany no jerena, dia ilay Tenin‟Andriamanitra dia nivoaka tao amin‟ny Ray, ary nataony tonga nofo dia niara-nonina tamintsika, ary dia izay izany no mahatonga an‟i Jesosy Kristy hamerimberina matetika ao amin‟ny baiboly manao hoe :“Izy dia nivoaka avy tao amin’ny Ray”; ary izany fomba fitenenany izany aza matetika, dia saika tsy azon‟ny olona mihitsy. Satria i Jesosy Kristy moa dia nateraky Maria sy Josefa, ka ahoana no ahafahana mino an‟izany? Dia handray toko sy andininy vitsivitsy isika mba ahalalantsika fa io Jesosy Kristy io anie, dia nivoaka avy tao amin‟ny Ray, ary tsy hoe nivoaka nandeha nidina tety amintsika fotsiny izy, fa tena nirahina nandeha tety amintsika mihitsy.
Jaona 7:28–29 «28 Dia niantso teo an-kianjan’ny tempoly Jesosy, raha nampianatra, ka nanao hoe: Izaho dia fantatrareo, sady fantatrareo koa izay nihaviako; ary tsy avy ho Ahy Aho, fa marina ny naniraka Ahy, Izay tsy fantatrareo. 29 Izaho mahalala Azy; fa Izy no nihaviako, ka Izy no naniraka Ahy. »
Milaza mazava tsara izany ny Soratra Masina fa hoe ity Jesosy Kristy izay tonga teto ity, dia Andriamanitra no nahatongavany. Ary io Andriamanitra io no naniraka azy.